U-Elizabeth Gaskell. Imisebenzi emi-5 emikhulu yalo mbhali uVictoria | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Ababhali, Inoveli, Inoveli yothando
U-Elizabeth Gaskell wazalwa ngoSeptemba 29, 1810 e-Chelsea, eLondon. Wayengomnye wamagama amakhulu ababhinqileyo Inoveli yama-Victorian kwinguqulelo yayo eyiyo. Wayengumhlobo naye UCharles Dickens kwaye wayesaziwa ixesha elide ingakumbi kuye ngobomi bukaCharlotte Brontë.
Namhlanje ndijonga kwakhona 5 ezona zihloko zakhe zidumileyo onokuyazi okanye oyibonileyo iguqulwe kumabonwakude, njenge Emantla nasezantsi. Kodwa bakwanjalo UMary barton, Indlu yePáramo, iiNdaba zeGothic okanye uSylvia's Loves
1 U-Elizabeth gaskell
2 Iinoveli ezingama-5
2.1 UMary barton
2.2 Iimbali zeGothic
2.3 Emantla nasezantsi
2.4 Indlu yama-moor
2.5 Uthando lukaSylvia
Umsebenzi kunye nomzobo kaElizabethe Cleghorn Gaskell uye wahlaziywa ngokuhamba kwexesha, mhlawumbi ngenxa yokuba uncwadi lwexesha lama-Victorian aluzange luphume ngesitayile. Kwaye i Umzobo wentlalo ukuba ubonakalisile kwiinoveli zakhe eyona intle inokufunyanwa. Kakhulu kangangokuba itsale umdla wababhali-mbali kunye nabathandi belo hlobo. Ke akukaze kube lixesha lokufumana. Zezi I-5 yemisebenzi yakhe eyaziwa kakhulu.
Ngaba yakhe inoveli yokuqala kunye ine amava am kaGaskell, owathi, njengomfazi womalusi, wazibonela ngokwakhe iimeko zokuphila zabasebenzi baseManchester kunye neziphumo zoHlaziyo lwezoShishino.
Libali le intombazana ethandana nonyana mhle womqeshi kwaye imcekisile indoda emtshutshisayo eyayiza kunikela ngobomi bayo ngenxa yayo. Konke phakathi kwendalo yoxinzelelo olukhulu lwentlalo ngenxa yendlala kunye nentswela-ngqesho.
Izinto ezingaqhelekanga zohlobo lweGothic ziphakathi kokunye, ukunyamalala okungummangaliso, iziporho eziziphindezelayo, iziqu ezibini zokuphila okanye iziqalekiso ezivalelwe kwiinqaba ezikhuselweyo. Y Batsala noGaskell.
Kule ndawo Iimbali zeGothic ifakiwe abanye njenge Igqwirha uLoyisi, ingxelo yokuzingelwa amagqwirha salem ngo-1692. Okanye Ndifuna ukwazi, ukuba yinyani, apho a elahlekileyo ongamaziyo Ehlathini uye emntwini wasemzini intlanganiso yabalinganiswa ababalisa ka fairies.
Enye yezona zidumileyo mhlawumbi, zilungiselelwe u hit uthotho lwetv kwicala i BBC e 2004.
Ubalisa ibali lika UMargaret Hale, Umfazi omncinci ovela emazantsi eNgilane othe, ngenxa yeemeko zosapho, wanyanzelwa ukuba afudukele emantla. Kungumfanekiso omkhulu wempikiswano yezentlalo nezopolitiko ezithathwe kuhlaziyo lwezemizi-mveliso. KuMargaret, emazantsi yi-idyll yasemaphandleni kwaye emantla ingcolile, irhabaxa kwaye inobundlobongela. Nangona kunjalo, njengoko edibana neli hlabathi litsha, umtsalane okhulayo kuJohn Thornton, umnini womzi-mveliso wempahla eyolukiweyo, utshintsha umbono wakhe kunye nokucalula kwakhe.
Yapapashwa njenge Ibali leKrisimesi Ekupheleni kwe 1850 kwaye intle Ilizwe elithanda ibali exutywe nomnwe wentsomi yakudala efana naleyo ikwi Cinderella. Konke ukuphakamisa isidima, ukuthanda okuhle kunye nobubele, iimpawu zikaMaggie Browne, ophambili kuyo. UMaggie uhlala kunye Umama ongakhathaliyo kunye nomzalwana onamabhongo abaphatha kakubi kwaye bamdelela ngokulinganayo. Umtsalane wayo kunye uthando lubuyiselwa ngendlalifa yomninimzi baya kumkhokelela ukuba amlweleUkoyisa iyantlukwano ekuhlaleni Oko kwahlukanisa nothando lwakhe. Kananjalo iya kutyhiliselwa kwifayile ye- idini elikhulu ukusindisa usapho lwakhe olungenambulelo.
Un thanda unxantathu sisiseko sale noveli apho amadoda amabini yoonobumba obahluke kakhulu sBathandana noSylvia Robson, intombazana encinci evela kumaphondo. Bangabarhwebi UFilipu Hepburn kunye nehabhu UCharley ukoyika. Kodwa bobathathu babelana ngemfihlo eziza kuchaphazela ikamva lakho. Ibali lenzeka kwidolophu yaseNgilani kwizibuko ngexesha le iimfazwe ze-napoleonic.
Yimbonakalo entsha yamasiko kunye nokuziphatha koluntu lwasemaphandleni, apho ucwangco, ukuzimela, uthando kunye nobuxoki ziyakwazi ukuphakamisa kunye nokutshabalalisa ubudlelwane babantu. UGaskell wayichaza ngamazwi akhe njenge owona msebenzi ulusizi awubhalileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » U-Elizabeth Gaskell. Imisebenzi emi-5 emikhulu yalo mbhali uVictoria
Irene Villa: iincwadi